Fabián Marcel Gaete dia mamorona zavakanto bitika afaka segondra | Famoronana an-tserasera
Fantatrao ve ny kanto bitika? Miaraka amin'ny antsipiriany be, ity artista ity dia manao kanto tena miavaka, Fabian Marcel, hatramin'ny fahazazany dia nanana fitiavana amin'ny hosodoko. Ny fianakaviany iray manontolo dia nanao fanazaran-kanto tamin'ny lafiny samihafa. Nanaraka an'io fomban-drazana io i Fabian, nanohy ny fitiavany zavakanto sy ny sary hosodoko mandra-pahatongany loza Tena matotra tokoa izany herintaona tsy misy fahatsapana na fivezivezena.
Taorian'ny fampisehoana fanarenana Nandritra ny herintaona mahery, tsy afaka nahita na nihetsika izy dia nifantoka tamin'izay ampianaro ny saina. Vantany vao sitrana izy dia nanohy ny fitiavany mandoko.
1 Ilay mpanakanto
2 30 segaondra vao vita frame
3 Mampiavaka ity pinto ity
Fabian Marcel teraka tany Silia ary nifindra tany Malaga izy taona maro lasa izay. Amin'izao fotoana izao artista an-tanàn-dehibe. Mandoko ary ataovy ny anao miasa amin'ny rantsan-tànanao. Afaka mahita azy ianao amin'ny araben'i Malaga, amin'ny ankapobeny dia hita amin'ny mitataovovonana ny a zoron'ny Katedraly.
30 segaondra vao vita frame
Mahagaga ny fahaizan'i Fabian maka sary. Ao amin'ny programa an'ny dongona fitoeran'ny vitsika taloha nasaina izy haneho ny fanomezany. Amin'ny Cristal afaka nanao fampisehoana, tamin'ny ara-drariny segondra vitsy, sanganasa kanto mitondra ny lohateny hoe "Mikitika ny tontolo." Ny tena manaitra dia ny natiora nolokoany. Izy dia afaka manazava ny nuansa tsirairay mandritra ny fandokoana azy.
Anisan'ireo fanomezam-pahasoavany zava-kanto rehetra izy mamorona tontolo: tendrombohitra, ranomasina, fiposahan'ny masoandro.
Mampiavaka ity pinto ity
Mandoko amin'ny rantsan-tananao, amin'ny rantsan-tànanao. Ny sonia nataony, izay ampidiriny amin'ny sanganasany rehetra, dia vorona manidina. Manana ambaratonga antsipirihany mahatalanjona, ary mamporisika anao aho hijery ny fomba fanaovan-kantony. Fahagagana!
Tsy mampino ny fahitana azy, ary raha ny hevitra amin'ny internet, an'ireo mpizahatany talanjona amin'ny fahaizany sy kanto, miavaka amin'ny azy vidiny ambany. Raha ny filazan'ny mpizahatany britanika iray dia nampandoaviny vola enina euro ho an'ny hosodoko ary folo euro ny de los.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Jereo ny kanto bitika an'i Fabián Marcel Gaete
Aiza no azo vidiana ireo zavakanto ireo amin'ny Internet? (Raha azo atao)
Mamela anao hamaky mazava sy tsy misy fanelingelenana ao amin'ny Chrome